Weerar lagu dhammaaday oo lagu qaaday kaniisad ku taalla Mareykanka - Caasimada Online
Home Dunida Weerar lagu dhammaaday oo lagu qaaday kaniisad ku taalla Mareykanka
Weerar lagu dhammaaday oo lagu qaaday kaniisad ku taalla Mareykanka
San Antonio (Caasimada Online) – Mas’uuliyiinta gobolka Texas ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in labaatan iyo toddobo qof lagu dilay kaniisad ku taala magaalada Sutherland Springs ee gobolkaasi, kadib markii uu rasaas ku furay nin hubeysan.
Weerarka oo dhacay qiyaastii 11:30 barqanimo ee axad, xilliga saacadda dhexe ee Mareykanka, ayaa wararku waxaa ay sheegayaan in shan iyo labaatan qof oo kale ay ku ku dhaawacmeen, islamarkaana la dilay ninkii weerarka gystay.
Magaalada uu weerarka ka dhacay ayaa qiyaasti konton kilomitir dhanka koonfur bari kaga began magaalada San Antonio.
Booliska gobolka Texas ayaa warbaahinta maxaliga ee dalkaasi uu sheegay in raggii weerarka geystay la dilay, waxaana la arkayay muuqaalo muujinaya ciidamada ammaanka oo soo buux dhaafiyay goobta uu weerarka ka dhacay.
Gawaarida gurmadka degdega iyo kuwa dab damiska ayaa sidoo kale soo gaaray goobta, waxaana sidoo kale soo baxaya warar sheegaya in dadkii halkaasi ku sugnaa lasoo daad gureeyay.
Illaa iyo hadda lama shaacin aqoonsiga ninka weerarka gaystay.